Mpiandry Raharaha Ao Amin’ny Firenena Shinoa Mandrisika Ny Olona Hitoroka Ireo Ahiahiana Ho Mpitsikilo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2015 1:18 GMT
Sary mampihomehy mamaritra ireo mpitsikilo mangalatra ny fiarovam-pirenena noho ny resaka vola. Sary tao amin'ny Weibo.
Ao anatin'ny tsngerintaonan'ny andro nandaniana ilay lalàna manohitra ny asa fitsikilovana ao Shina, natomboky ny Birao Misahana ny Fiarovam-pirenena ny 12339 — fiandrasana raharaha any Jilin , faritany avaratra atsinanana — ho an'ireo olontsotra, mba hitorohana ireo ahiahiana ho manohintohina ny filaminam-pirenena.
Hatramin'ny nankatoavana ilay lalàna, ny 1 Nvambra 2014 dia efa napetraka any amin'ireo faritany hafa koa ireo fiandrasana raharaha, saingy tsy maintsy mahazo ny faneken'ny governemanta foibe ny fametrahana ilay fiandrasana raharaha ho fihazàna ireo “mpitsikilo” manerana ny firenena.
Kanefa, araka ny tatitra tanaty vaovao, ny biraom-paritra misahana ny fiarovana no nametraka ilay fiandrasana raharaha fa tsy ny manampahefana foibe mivantana. Miteraka fanontaniana vitsivitsy izany. Raha tsy avy amin'i Beijing ny fanapahankevitra, nahoana ireo vavahadin-tseraseran'ireo goavan'ny filazambaovao no nankalaza be ny vaovao momba ilay fiandrasana raharaha, izy ireo izay eo ambanin'ny fifehezan'ny Antoko Kaominista Shinoa daholo? Manana fahefana hitantana fiandrasana raharaha ve ny biraom-paritra nefa tsy nahazo fankatoavana tamin'ireo manampahefana foibe?
Ireo olompirenena Shinoa, etsy ankilany, mijery lavitra mihoatra ny lafiny teknika amin'ny politika tafiditra amin'io. Nanontany tena ry zareo, afaka tena mamantatra ny atao hoe mpitsikilo ve ny olompirenena tsotra?
‘Mijery anao eny an'arabe i Razokibe’
Toa tsy izany no eritreritry ny ankamaroany. Ny sasany nanome petrakevitra hoe voa nafafy mba hitondra saritaka eny anivon'ny vahoaka fotsiny ilay resaka fiandrasana raharaha, na handrisihana ny olona hifamely mihitsy aza, tahaka izay nitranga nandritry ny Revolisionan'ny taona 1960 sy 70, rehefa nitarika fampielezankevitra nahery setra ny Filoha Mao mba handringanana ireo notsaraina ho mpankahala ny kaominista teny anivon'ny fiarahamonina. Tao anaty kofehim-baovao tanatin'ny faritra natao ho an'ny lohateny vaventin'ilay tranonkala Weibo, media sosialy Shinoa, faritan'ny sasany ho “horohoro fotsy” ny zava-mitranga, tetikady hambolena tahotra sy hitazonana ny fahanginan'ny vahoaka :
Dia tena mora ny mahita antony hampidirana am-ponja ny olona.
Savaranonando ho an'ny Revolisiona Ara-Kolontsaina
Horohoro fotsy, mijery anao eny an'arabe i Razokibe. Amporisihana ny hifampitorohan'ny olona mba hampihorohoro azy.
Ny sasany nanome fanamarihana manesoeso :
Toa tsapako ho ny chengguan (Birao Fitantanana an-tanàndehibe sy Fampiharana ny Lalàna) no mpitsikilo, ny hery vahiny no mandefa an-dry zareo mba hamoritra ny olompirenena tsotra! Potsiro ny “tia” raha ekenao.
Mbola mila mitatitra foana ve isika? Ankoatra ny [Filoha] Xi Jinping sy [Praiminisitra] Li Keqiang, mampiahiahy daholo ireo mpikambana ao anatin'ny Kaomity Foiben'ny Antoko Kaominista Shinoa.
Tokony mba hitatitra momba ny Ministeran'ny Fandrindrana Fiterahana, niezaka ny nanafoana ny foko Han izy io [tamin'ny famononana zaza tsy mbola teraka akory, tamin'ilay Politikan'ny Zaza Tokana].
Mpitsikilo aho, hisy hitoroka ahy ve izao?
‘Ny kolikoly no tena mamely mafy an'ity firenena ity’
Na izany aza, naneho ny fanohanany ilay rafitra fanaovana tatitra ny sasany tamin'ny olona. Lahatsoratra iray momba ny “Fomba hamantarana ny mpitsikilo eo amin'ny manodidina anao”, navoakan'ny mpandalina aterineto iray miaraka amin'ny anarana tsy fantatra, hoe “Eo anelanelan'ny mandeha sy miverina”, no niparitaka be tany anaty sehatra media sosialy be mpampiasa, isan'ireny ny Weibo sy WeChat:
Natomboka ny 12339, sampana mpiandry raharaha hitorohana ireo mpitsikilo. Iangaviana isika hijery ireo olona mampiahiahy eny amin'ny manodidina antsika, anisany, nefa tsy voafetra ho ireo ihany, ny mpitsikilo, mpamadika, mpikotrika, mpanome vaovao ary ireo olon'ny firenena vahiny. Ireto famaritana eto ambany ireto no hanampy anao hamantatra [ny ahiahiana]:
1. Tsy mazava tsara ny anton'asany; manana asa maro ary tsy lany fika.
2. Ireo izay mankafy ny fanosehana lavitra kokoa ireo olana miteraka resabe ary mijery ny valinkafatry ny sasany eny anaty famoriambahoaka. Mety hifandray aman'olona ry zareo arakaraky ny toerana raisin'ilay olona ary hanentana azy hanao hetsika manohitra ny governemanta.
3. Ireo mpifandray amin'ny any ampitan'ny ranomasina sy mpitatitra vaovao, mpanao gazety manana fifandraisana any ampitan'ny ranomasina; mpikambana ao amin'ny fiangonam-pianakaviana, ny sasany amin'ireo mpikarakara ONG.
4. Manana asa mazava ilay olona ao anatin'ny karapanondrony, saingy miovaova be ny ora iasàny. Sandoka ny anaran'ny orinasa misoratra eo amin'ny karapanondrony na orinasa vao haingana no noraketina na manana endrika hafa mampiahiahy.
5. Ireo izay imbetsaka nandeha nianatra tany ampitan'ny ranomasina, na ny taonany tsy mifanaraka amin'ny fari-pahalalana azony tany ampita.
6. Ireo izay liana manokana amin'ireo lohahevitra saropady, anisany, saingy tsy voafetra ho izay ihany, ny politika, ny raharahan'ny tafika, ny fomba fijerin'ny daholobe na ny fandraharahàna.
7. Ireo mandeha mivahiny mba hihaona aman'olona sasantsasany no sady mifampizara fonosana na antontan-taratasy amin'izy ireny.
8. Ireo tsy tapaka manatrika famelabelarankevitra akademika sy fihaonana momba ny fandraharahàna, miresaka momba ny olana manohitra ny governemanta ary mampitombo resaka momba ny tombontsoan'ireo firenena vahiny.
Nahita ilay hafatra anaty aterineto etsy ambony i Yang Hengjun, mpitondra fanehoankevitra malaza amin'izao fotoana izao no sady manampahefana fahiny tao amin'ny governemanta Shinoa, nifindra monina any Aostralia, ary nanakiana hoe mandrisika ny fanenjehana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny tena io :
Mety tsy hanana ireo toetoetra nolazaina etsy ambony mihitsy ireo mpitsikilo sy mpikotrika. Etsy andaniny, nandritry ny Revolisiona ara-Kolontsaina, ny toetoetra tahaka izany no nampiasaina hitsimponana ny mpitsikilo. Fantary ny tsirairay ny vokatr'izany. Araka ireo toetoetra ireo, ireo manampahaizana mahalàla tsara an'i Shina sy ny raharaha iraisampirenena, ireo mpitarika hevitra ety anaty aterineto, ireo manampahaizana olontsotra sy mavitrika dia tsy ho tafiditra mihitsy ao anatin'ilay famaritana. Inona no ilàna ny fametrahana ilay fiandrasana raharaha sy ny namoahana toetoetra tahaka izao? Tena te-hiverina marina amin'ny vanim-potoana nijeren'i Razokibe anao isaky ny kihon-dàlana tokoa ve ianao?
Raha araka izay mba fantatro, ny kolikoly no tena mamely mafy an'ity firenena ity, ary eny amin'ny manodidina antsika eny izy io. Efa niharany mihitsy aza ny sasany tamintsika. Saingy tsy misy mpiandry raharaha ho an'ny kolikoly nambara tanaty fihetsiketsehana be tahaka izany. Tsy misy miteny amintsika hoe ahoana no hamaritana ny toetoetry ny kolikoly, fa dia ny “mpitsikilo” izao no olana mahamay. Aleo apetratsika anjorony ny zavamisy hoe tokony ho anjaran'ireo manampahefana matanjaka avy amin'ny governemanta no mamantatra ireo mpitsikilo. Ho an'ny olontsotra, raha toa ka tsy manana porofo mazava ry zareo, tsy tokony hitorotoroka ny hafa. Fantatry ny tsirairay fa tsy hanetsika na dia rantsan-tànana iray aza ny governemanta mba hamàfa anaran'olona iray taorian'ny nanondroana azy ho “mpitsikilo”, etsy ankilany, ny fanondroana azy dia midika fampijaliana mandritry ny fotoana lavabe ho an'ilay olona.
Notsipihan'i Wang fa raha ny marina dia toetoetra misy ao aminy daholo ireo voalaza, ka nanasa ny olona izy hitoroka azy :
Toa tahàka ny milaza ahy manontolo ilay famariparitàna. Izay izany, azonareo atao tsotra izao ny mitoroka ahy. Amin'ny maha-mpanoratra, lasa saropady tsy ho azo soratana daholo ny zavatra rehetra. Voasivana tanteraka daholo ny lahatsoratra. Tsy afaka ny hiaina tahaka izao intsony aho. Tsaratsara koka ny miaina any am-ponja, any ianao manana sakafo sy toerana hipetrahana. Azo eritreretina mihitsy hoe mety hahazo loka vitsivitsy aho [ireo loka momba ny zon'olombelona avy any ampitan'ny ranomasina no ao an-tsaina].